परमेश्वरलाई पछ्याउने साधारण व्यक्ति हुँ । | eBachan Nepali Christian Magazine
तपाईंको परिचय ?
मेरो नाम एन्ड्रयु पौडेल हो । म हाल गे्रश इन्ट्रनेसनल कन्सलटेन्सीमा निर्देशक हुनुको साथै सामाजिक कार्यकर्ता र परमेश्वरलाई पछ्याउने साधारण व्यक्ति हुँ ।
कसरी प्रभुलाई चिन्नुभयो वा ग्रहण गर्नुभयो ?
म पढाईको सिलसिलामा चितवन, भरतपुरबाट उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौं आए । मिति २००२ तिर मेरो आफ्नै ठूलो दाई रामचन्द्र पौडेल चर्च जानुहुन्थ्यो र वहाँको माध्यमद्वारा बाइबल अध्यल गर्न थाले । त्यसपछि आफै प्रेरित भएर परमेश्वरलाई मैले ग्रहण गरे । परमेश्वरको आफ्नै वचन हो भनेर पनि थाहा पाए ।
तपाईंले आफ्नो अध्ययन, पढाई कसरी पूरा गर्नुभयो ?
मैले व्यवस्थापन संकायमा एम.डी.आई.एस.कलेज बाट स्नातक उर्तीर्ण वि.सं. २०१० मा भए । त्यसपछि अधययन र पढाई भन्ने कुरा कहिल्यै समाप्त हँुदैन, तसर्थ मैले प्रत्यक दिन सिक्दै गए र अहिले सम्म सिक्नेक्रममा नै छु ।
सेवाकाई वा मण्डली सेवामा जवानहरूको कतिको भुमिका हन्छन् ?
युवा पुस्ता एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा लोभ हुँदै गइरहेको छ । तर युवा जनशक्ति भनेको भोलिको असल अगुवा हो । मण्डली र सेवाकाईके शसक्त माध्यम र मेरूदण्ड नै हो । किनभने युवाहरूमा नै ज्ञान र असल नेतृत्वपनको महत्व हुन्छ र उनीहरूले समाजमा नयाँ छाप दिन सक्छन् । परिवर्तन गर्ने क्षमतामा पनि निकै सहयोग पु¥याउन सक्छन् । सबै युवाहरू मण्डली सेवा र सवाकाईको निम्ति र भविष्यको एक मार्ग देशको र अगुवाई गर्ने जन शक्ति हो ।
ग्रेश इन्ट्रनेसनल कन्सलटेन्सीको बारेमा बताई दिनुहुन्छ की ?
यो एउट निजी संस्ता नेपाल सरकारमा दर्ता भएको संस्थाा हो । यसले उच्च हिक्षाको लागि उपयुक्त विश्वविद्यालय छनोट गरी विविध भाषाहरूको पठन, पाठन गराई विभिन्न देशहरूमा ( अष्टे«लीया यु एस ए जापान युके चाईना) मा विगत १० वर्ष देखी नै विद्यार्थीको हितको लागि सेवा गर्दै आइरहेको छ ।
हजुरको विचारमा व्यवसाय र सेवाकाईम कत्तिको ग्राहो, अप्ठ्यारो छ ?
मेरो विचारमा, व्यवसाय र सेवाकाई भन्ने कुनै ग्राहो कुरा होइन । यदि हामी इमान्दार, असल नेतृत्वपन लिएर गरेको छौं भने हामी जुन मा पनि असल र सफल हुन्छौं ।
तपाईं एक प्रभुको जनको नाताले, यो ग्रेश इन्ट्रनेसनल कन्सलटेन्सी मा कत्तिको समय निकाल्नूहुन्छ । ग्राहो छ ? सजिलो छ ?
एक प्रभुको जनको नाताले, यो काम परमेश्वरको महिमा हो । र तर म ग्रेश मा भएर पनि शहर भित्रहुँदा विश्रामको लागि समय निकाल्छु । र अरू समय म जस्तो, जहाँ भए पनि प्रभु संगको बातचित, प्रार्थना गर्छु । मेरो नाउँ सोध्दाखेरी पनि प्राय जसोले भन्नुहुन्छ, तपाईं ईसाइ भनेर र म जवाफ दिन्छु “हो” र म त्यो विश्वास र आस्थाको कारण म धेरै खुसी छु । प्रभुमा र यो कार्यलएमा पनि मलाई अप्ठ््यारो छैन ।
बिगत देखी अहिले सम्म, गे्रश ले के–कस्तो सुविधाहरू दिँदैआइरहेको छ ?
गे्रशमा आउने विद्यार्थीहरूको समस्याहरूलाई बुझी सही उपायहरू र मार्ग निर्देशन गर्ने कामहरू प्रदान गर्छौं । बाह्य देशमा जाने विद्यार्थीहरूको निम्ति बसाईसराईको जीवन विमा र बाह्य देशमा नै बस्ने र भिषाको सुनिश्चित दिन्छौं । साथै विभिन्न विषयहरू र भविष्य र शिक्षाको लागि ऋणको पनि व्यवस्था गरि राखेका छौं । हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै उत्तममा सर्वोतम सेवा दिनु विद्यार्थीलाई नै हो । त्यस्तै हामीले भाषा रूचि भएका विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी, स्पेनिस, जर्मन, जापानिज र फ्रेन्ज भाषाहरूको सुविधा दिदैं आइरहेका छौं ।
विद्यार्थीहरूले गे्रशलाई नै किन रोज्ने ? छनोट गर्ने ?
स्थापना कालदेखिनै हामीले विश्वव्यापी शैक्षिक संगठनहरू संग विविध तरिकाले काम गर्दै आइरहेको छौं । हामी विद्यार्थीहरूको उत्कट इच्छालाई प्रतिबधताको लागि विश्वस्थ, विश्वासियतालाई उनीहरूको विदेश अध्ययनको लागि यहाँ खड़ा भउका छौं । धेरैजसो हाम्रो संस्थाका सदस्यहरू बाह्य शैक्षिक पृष्ठ भूमिका नै हुन् ! र अहिले सम्म विद्यार्थीहरूले सूचना संजालको माध्यमद्वारा एकिकृत भई, स्वयम विरक्षन गरी यसलाई आदर्श को रूपमा छनोट गरिएका छन् । र गरिराखेका छन् ।
अन्ततेयमा, वचन पत्रिका मार्फत, के भन्न चाहनु हुन्छ ?
हामीले परमेश्वरको साना तथा ठूला सल्लाहलाई खोज्नुपर्छ र पछ्याउनुपर्छ, जहाँ हामी काम गर्छौं । जब हामी परमेश्वरको आज्ञा वा सल्लाहलाई पछ्याउदैनौं तब हामीलाई दुःख मात्र आउँदछ । हामीले आत्मिक आमा वुवा (पा.गुरूबा–गुरूआमा), श्रीमान श्रीमती, साथीहरू, प्रेम गनेहरू (छिमेकीहरू) र संगैको विश्वासीहरूबाट पनि सर–सल्लाह खोज्नुपर्छ । हामीले कुनै पनि सल्लाह, निर्णय छिटै इन्कार गर्नु हुन्न, तर हामीले सम्झनुपर्छ कि परमेश्वरबाट आएको सल्लाहको विरोधमा गर्नुहुँदैन । हामी प्रेममा, सल्लाह दिन्छौं यद्यपी सल्लाह उच्च कोटीको भएपनि हामी पछि हट्दैनौं । हामीले नबुझीकन छिटै कुनै पनि सल्लाह दिनु हुँदैन । कहिलेकाहीँ हामीले सल्लाह दिनुकोे सट्टामा प्रेम र प्रार्थनाद्वारा हामी आफैलाई देखाउन सक्छौं । त्यसैगरी, हामी गहिल्यै पनि असल सल्लाह र सुझाव सुन्नलाई इच्छा राख्नुपर्छ । बुद्घिमान मानिस राम्रो असल कुरा र ईश्वरीय कुराहरूलाई स्वीकार गर्छ र पछ्याउँछ । खोजिरहनु र पछ्याइरहनुले हामीलाई बुद्घिमान मानिस बनाउँदछ । आमेन
Previous: ख्रीष्टको अद्वितीय रगतको बारेमा जान्नैपर्ने ७ कुराहरू
Next: नेपालका हरेक क्याम्पसमा गुणक चेलाहरू